रामचन्द्र पौडेल : जिल्लादेखि केन्द्रसम्म यति धेरै कमजोर किन ? | newdnn.com
१९,बिहीबार २०:४२ Sangita Rai
काठमाडौँ, २० असोज । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि जिल्ला र क्षेत्रस्तरबाट उम्मेद्वार छनौटका लागि यतिबेला नाम सिफारिसको क्रम चलिरहेको छ । यसक्रममा सबै दलका शिर्ष नेताको सिफारिस चलिरहेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा डडेल्धुराबाट सर्वसम्मत सिफारिस भइसकेका छन् । यस्तै प्रदेश नं. ७ को अछामबाट एमाले नेता भीम रावल पनि सर्वसम्मत सिफारिसमै छन । प्रदेश नंं. ७ बाट सर्वसम्मत हुने यी दुई नेता मात्रै ‘बिग फेस’ हुन् ।
यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुर्व झापाबाट सर्वसम्मत छन् । झलनाथ खनाल इलामबाट सर्वसम्मत छन । नेता सुवास नेम्वाङ पनि सर्वसम्मतकै लाइनमा छन । माधव नेपाल पनि रौतहटबाट सर्वसम्मत छन ।
विश्वप्रकाश सर्वसम्मत, तर पौडेल हुन सकेनन् ?
कांग्रेस नेता विश्वप्रकाश शर्मा पनि झापाको आफ्नो क्षेत्रबाट सर्वसम्मत भइसकेका छन् । तर यहाँ काग्रेसका बरिष्ठ नेता भएर पनि रामचन्द्र पौडेल आफ्नै गृहजिल्ला तनहँुबाट सर्वसम्मत हुन सकेका छैनन् । र भ्रष्ट नेतासँगै कांग्रेसको हेडक्वार्टरमा सिफारिस भएका छन ।
पुर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी नामी भ्रष्टाचारी हुन् । सर्वोच्च अदालतले उनलाई खुमबहादुर खड्कासँगै भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । तर उनी पौडेलसँगै सिफारिस भएका छन । उनका साथमा शंकर भण्डारी, रामचन्द्र भण्डारी लगायतका नेता पनि एउटै क्षेत्रबाट सिफारिस भएका छन ।
यसले देखाउँछ की आफुलाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार ठान्ने रामचन्द्र पौडेल आफ्नै गृहजिल्लामा कति कमजोर छन् भन्ने कुरा । कतिसम्म भने उनलाई जिल्लाका नेताहरुले भ्रष्टाचारी नेताकै कित्तामा राखेर उम्मेद्वार तोक्न पार्टीको हेडक्वार्टरमा सिफारिस गर्छन् ।
१७ पटकसम्म प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका पौडेल
२०६८ सालमा प्रधानमन्त्रीका लागि १७ पटकसम्म संसदमा चुनाव लडेर पनि असफल भएर प्रधानन्त्री बन्न नसकेका उनी अहिले सभापति देउवाका प्रतिष्पर्धीका रुपमा आफुलाई उभ्याउन खोज्छन् । १३ औँ महाधिवेशनमा पहिलोपटक कोइराला विरासतलाई तोडेर सभापति हुने दौडमा रहेका उनलाई कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पछारिदिए ।
सिटौलाले समर्थन दिएपछि दुईपटक भएको सभापतिको चुनावमा देउवाले बाजी मारे । रामचन्द्र फेरी पनि पछारिए । जसरी उनी प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको चुनावी दौडमा पछारिए । त्यसरी नै प्रदेश र प्रतिनिभिसभाको चुनावमा पनि नपछारिएलान् भन्न सकिन्न ?
आफ्नो बिचारधारा नभएका नेता
कराण उनको राजनीतिक विचार र संगठन क्षमता निकै कमजोर छ । दुई दिनअघि मात्रै वाम एकता (एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिबीचको चुनावी तालमेल)ले नेपाली राजनीति तरंगित बनायो । तर पौडेलले आफ्नो सानो बिचारसम्म पनि सार्वजनिक गर्न सकेनन् ।
बरु युवा नेता गगन थापाले कांग्रेस अवस्थाको ऐना देखाई दिए । बरिष्ठ नेता भएका पौडेलले बाफ सम्म फाल्न सकेनन् । तर उनै पौडेल बेला बेला देउवाले पार्टी हाक्न सकेनन् भनेर मिडियामा हुंकार गरेर आफुलाई शक्तिशाली भन्ठान्छन् ।
त्यसैले अब पौडेलले राम्रोसँग बुझ्न जरुरी भइसकेको छ ।
की आफ्नो करिब तीन दशक लामो राजनीतिक संघर्षमा कम्तीमा पनि आफुलाई राम्रोसँग स्थापित गरेर मात्रै विश्राम लिउन् । ता की भविष्यमा पौडेल कति कमजोर होइन् । अब कति बलिया छन् भनेर भन्नु परोस ।
तर यस्तो नआओस की नामी भ्रष्टाचारी भएपनि गोविन्दराज या अरु कसैले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट पाए तर पौडेल निराश बने भन्ने दिन नआओस् । किनकी उनले संसदमा भ्रष्टाचारीले चुनाव लड्न पाउनुहुन्न भनेर राम्रै विफ्रिङ गरेका थिए ।
उनकै बलले कांग्रेसका भ्रष्टाचारी चुनावमा आउन नसक्ने आकंलन गरिएको थियो । तर उनकै गृहजिल्लाबाट गोविन्दराज जोशी जस्ता नामी भ्रष्टाचारीले उनलाई खुल्लमखुल्ला चुनौति दिएका छन ।
भ्रष्टाचार र स्वार्थको राजनीति हावी हुने कांग्रेसमा देउवाको ‘पावर’ लाएर जोशीलाई तनहुँबाट उम्मेद्वारको चिठ्ठा पर्यो भने पौडेल फेरी एकपटक हिस्स हुनुपर्ने हुनसक्छ !